Ny filohan'ny birao afrikana fizahan-tany dia manaparitaka hafatra momba ny fanantenana ao Kilimanjaro
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Ny filohan'ny birao afrikana fizahan-tany dia manaparitaka hafatra momba ny fanantenana ao Kilimanjaro
Birao fizahantany afrikanina • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • People • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Travel Wire News
Hafatra fanantenan'ny filankevi-pitantanana afrikanina
Mitondra hafatra fanantenana ho an'ny fampandrosoana fizahantany any Afrika, ny filohan'ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany (ATB), Cuthbert Ncube, dia nitsidika ny Tendrombohitra Kilimanjaro, tampon'ny havoana avo indrindra eto Afrika, niaraka tamin'ny masoivoho lehibe ao amin'ny birao misy azy.
Tany amin'ny faritra avaratr'i Tanzania ny filohan'ny ATB hatramin'ny herinandro lasa teo, nandray anjara tamin'ny Expo momba ny fizahantany afrikanina voalohany (EARTE) izay nifarana tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity.
Miaraka amina ekipa ambasadaoro lehibe ATB avy amin'ny firenena afrikanina maro, ny filoha ATB dia nitsidika an'i Marangu, ny foiben'ny valan-javaboary Kilimanjaro.
Nitsidika ny vavahady fidirana ho an'ny dia mpihanika tendrombohitra Mount Kilimanjaro koa izy ireo.
The Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) Ny fitsidihan'ny filoham-pirenena ny tendrombohitra Kilimanjaro dia nanondro ny fanoloran-kevitry ny Birao hampandroso ny fizahantany afrikanina, nanaparitaka hafatra momba ny fanarenana ny fizahan-tany avy amin'ny famotehana ny COVID-19 ary ny votoatin'ny fampandrosoana ny fizahantany any amin'ny faritra sy afrikanina.
Ny Mount Kilimanjaro sy ny manodidina azy dia anisan'ny toerana mafana amin'ny fizahan-tany ho an'ny fizahan-tany, isam-paritra ary intra-afrikanina izay fialantsasatra an'arivony any an-toerana no mandany ny fetin'ny Krismasy sy ny Taom-baovao ary ny fetin'ny Paska.
Tanzania nandrehitra ilay "Torch Freedom" malaza teo an-tampon'ny Tendrombohitra Kilimanjaro 60 taona lasa izay, natao hamirapiratra manerana ny sisin-tany ary avy eo hitondra fanantenana izay misy famoizam-po, fitiavana misy fifandrafiana, ary fanajana izay misy fankahalana. Fa amin'ity taona ity, ny mpihanika tendrombohitra eo an-tampon'ny Tendrombohitra Kilimanjaro, toy izany koa ny mpiara-dia amin'ny ATB, dia handefa hafatra fanantenana fa toerana azo antoka ho an'ny mpitsidika i Tanzania sy i Afrika amin'izao fotoana izao miady amin'ny areti-mandringana COVID-19 amin'ny alàlan'ny vaksiny sy fepetra ara-pahasalamana hafa.
Taorian'ny nandaozany an'i Kilimanjaro dia nitsidika ny valan-javaboary Mkomazi ny filohan'ny ATB sy ny tariny, ilay hany toeram-piompiana biby fiompiana rhino any Afrika Atsinanana. Any amin'ny Tendrombohitra Pare Arc Atsinanana, ilay valan-javaboary dia eo ambany fitantanan'ny Tanzania National Parks (TANAPA) ary eo amin'ny 120 kilometatra atsinanan'ny tanànan'i Moshi ao amin'ny faritr'i Kilimanjaro eo anelanelan'ny boriborin'ny safari avaratra sy atsimon'i Tanzania.
Ny Rhino dia voaaro ao anatin'ny fitoerana masina mifefy 55 kilometatra toradroa, izay ao anatin'ny valan-javaboary 3,245-toradroa. Ny mpizaha tany dia afaka mahita ireto biby mampinono afrikana lehibe faharoa ireto mora kokoa noho ireo any amin'ny lemaka dia. Ny rhino mainty dia mandehandeha an-kalalahana eo anelanelan'ny Mkomazi sy ny ekosistia Tsavo mandrakotra ny Tsavo West National Park any Kenya.
Miaraka amin'i Tsavo, Mkomazi dia iray amin'ireo tontolo iainana voajanahary voaaro indrindra eto an-tany. Mkomazi, manamorona ny Ony Umba, dia manana gidro colobus tsy fahita firy izay mivezivezy ao anaty ala renirano. Ilay valan-javaboary dia manana toetrandro somary maina sy manana endrika fizarana orana bimodal. Manankarena karazana biby mampinono ihany koa ilay valan-javaboary. Karazam-borona 450 mahery no voarakitra ao amin'ny valan-javaboary, miaraka amina karazam-biby sy karazam-biby tsy manam-paharoa. Izy io dia eo amin'ny faritra arovana vitsivitsy any Tanzania miaraka amina gerenuk be sy hita maso ary be concentration beisa Oryx. Ity valan-javaboary ity dia iray amin'ireo savannah manankarena indrindra atsy Afrika ary mety eto an-tany manoloana ny isan'ireo biby sy zavamaniry tsy fahita firy sy mipoitra voaporofo amin'ny fisian'ny alika dia sy rhinoceros mainty.
Nandritra ny fitsidihany an'i Tanzania hatramin'ny herinandro lasa teo dia nanolotra izany Andriamatoa Ncube ATB's Continental Tour Award 2021 ho an'ny filohan'ny Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ho fankasitrahana ny fahavononany hanana fampandrosoana ny fizahan-tany Tanzania. Ny fanolorana ny mari-pankasitrahana ATB ho an'ny filoham-pirenena tanzaniana dia natao nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampirantiana ny fizahantany afrikanina voalohany atsinanana (EARTE) natao tao Arusha tanànan'ny fizahantany Tanzania Avaratra. Ny filoha dia nitarika tamin'ny famoahana ilay rakitsary fanadihadiana Royal Tour izay manasongadina ireo fizahan-tany mpizahatany ao Tanzania, ankoatry ny hetsika noraisiny manokana hanatsarana ny fampandrosoana ny fizahantany any Tanzania sy Afrika.